China Igwe igwe okpu agha na ndị na-eweta ya | Chapman
Akpụzi mba. CPM - 191009
Elu imecha Usoro Asụsụ Poland # 600
Ihe Plastic PP
Akụkụ akụkụ 300g
Nkebi nke 320mm X 230mm X 210mm
Ebu ebu 650 X 600 X 531mm
Akpụzi Aha Okpu igwe
Ndị na-agba ọsọ Onye na-agba ọsọ oyi maka ọnụ ụzọ ámá Point
Ebu ebu 1.2343ESR / 1.1730 / 1.2767
Ebu Ndụ okirikiri 500,000
Etiti oge 45ụbọchị
Ebu Cycle Oge: 37 nke
Bicycle traumata bụ ihe zuru oke na ọkachasị nsogbu nhụjuanya na-ebute nkwarụ na ọnwụ n'akụkụ niile nke ndụ. Nyocha a chịkọtara ihe kacha nso nso a banyere nyocha n'ọhịa nke ịnyịnya ígwè na-ejikọ yana ihe eji eji okpu igwe. Mpaghara nyocha trauma bicycle bụ site na okike dị iche iche ma dịkwa mkpa ọ bụghị naanị maka ndị dọkịta kamakwa maka ndị ọkachamara nwere agụmakwụkwọ, injinia, ikpe, mmezi ma ọ bụ ọrụ ahụike ọha na eze. N'ihi ọtụtụ ndị mbipụta ụwa na isiokwu pụrụ iche, nyocha oge dị mkpirikpi na-enyere aka ịchọpụta ntụle nyocha ọhụụ wee nyekwa ozi sitere na ọzụzụ ndị agbata obi maka ndị nyocha. Enwere ike ikwupụta na ruo ugbu a, na agbanyeghị na emeela nnukwu nyocha na mpaghara a, a chọkwuru ọmụmụ iji nyochaa ma melite ọnọdụ na mkpa pụrụ iche na mpaghara dị iche iche, afọ, mba na ịmepụta mmemme mgbochi ọfụma nke isi na ihu mmerụ mgbe ịgba ígwè.
Foto: Otu okpu agha si azọpụta ndụ gị: Mgbe ị dara isi gị, mkpụmkpụ siri ike na-agbasa mmetụta ahụ n'ọtụtụ ebe. Ihe niile dị nro dị nro (oroma) mgbe ahụ na-etinye ike ọ bụla (na-atụ anya) enwere mmebi dị n'isi gị.Na-enweghị okpu agha ahụ, mmetụta niile a ga-elekwasị anya na obere akụkụ nke isi gị, nwere ike ịgbaji okpokoro isi gị na ikekwe mebie ụbụrụ gị.
Na mbido nke mbụ, okpu okirikiri yiri okpu ọ bụla ọzọ, mana lee anya nke ọma na ị ga - ahụ ọtụtụ echiche - na sayensị — abanyela na imebe ahụ. Okpu agha a na-ahụkarị nwere akụkụ abụọ: shea dị elu na nke dị nro. Ezubere ikpu siri ike iji gbasaa ike nke mmetụta na mpaghara sara mbara ka okpokoro isi gị ghara ịdaji, ebe eriri ahụ dị nro bụ ịpịpụta n'ime ma banye ike mmetụta ahụ, yabụ a na-ebufe ya obere n'isi gị.
Ndị mmadụ na-eche na okpu igwe na-enweghị isi, mana nke ahụ agbanweela ugbu a. Gaghị ahụ ọkachamara ịgba ịnyịnya ígwè ọ bụla na-agba n'okporo ụzọ ma ọ bụ egwu na-enweghị okpu agha jikọtara isi ha. Okpu agha dị ezigbo mma karịa ka ha dịbu. You hụrụla etu ndị na-agba ịnyịnya ígwè si asọ oyi si ele anya n'ụgbụgbọ chrono ndị ahụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpu agha oge a niile na-ejupụta nke ọma ma nwee ike ime ka ndị na - agba ịnyịnya jiri nwayọ belata ihe. Otu okwu ịdọ aka ná ntị. Onye obula choro ka odi nma, mana cheta na okpu agha bu ihe nchebe. Fussy, ego ndi ozo buru ibu na-ere ahia gimmicks-ya egbula ego gi.
Nke gara aga: Car Parts akpụzi
Osote: Ihe nzacha mmanụ